Yaa Ka Dambeeyey Dilkii Shalay Loo Geestay Hogaamiyaha Kooxda Mucaaradka Libya
Su'aalo ayaa la iska weydiinayaa maalin kadib markii la dilay Hogaamiyihii Ciidamada mucaaradka dalka Libiya Jeneraal Abdel Fattah Younes oo khamiistii shalay aheyd la dilay isaga iyo labo kale oo kaaliyeyaashiisa ay ahaayeen.
Jeneraalkan oo horay uga falaagoobay Dowladda Libiya ayaa la dilay kadib markii looga yeeray jiida dagaalka, si su'aalo looga weydiiyo xiriir qoyskiisa la leeyihiin Madaxweynaha Libiya Qadaafi.
Madaxa Mucaaradka Libiya Mustafa Abdul-Jalil ayaa sheegay in la dilay Jeneraalkaas ka hor inta aanu soo gaarin goobta la filayay in su'aalaha lagu weydiiyay, waxaa uu sheegay in Kooxo Hubeysan ay dileen Jen. Younes.
Jeneraalkan ayaa horay Xukuumada Libiya ay ugu magacawday Bishii Febraayo wasiirka Arrimaha Dibada, hase ahaatee waa uu ku gacan seyray, waxaa uu ka mid ahaa ragga aadka ugu dhowaa Madaxweyne Qadaafi, marna ahaa La Taliyeyaashiisa sare.
Bishii Febraayo ayuu si rasmi ugu biiray Kooxaha Mucaaradka ee dagaalka kula jira Madaxweynaha Qadaafi iyo Xukuumadiisa.
Al Shabaab oo sheegtay Dilkii Maanta Muqdisho ka dhacay!
Xog xasaasi ah: Deegaanka kamsuuma oo xaley lagu duqeeyey kooxda alshabaab
AKHRISO: Qodobadda looga hadlay shirka Kooxda Xiriirka Somalia ee ururka iskaashiga Islaamka
Akhriso:-Wariyeyaasha Sacuudiga u xiran kadib dilkii Khashoggi
Taliye Saldhig oo Muqdisho lagu xiray kadib weerar uu geestay!!
Gaalkacyo Haweenay dil loogu geestay iyo xog dheeriya oo laga helaayo"
Malta reiterates call for commitment to an inclusive political process in Libya
yaa Ka dambeeyey Dilkii Aamnina Xuseen Xasan oo NISA Ka Tirsaneyd